कांग्रेस आई पार्टी भाजपाका अगाडि पुनः असफल, कारण यस्ता छन् ! « Nepal Bahas
कांग्रेस आई पार्टी भाजपाका अगाडि पुनः असफल, कारण यस्ता छन् !
कंग्रेसको पराजयमा पार्टी नेतृत्व मुख्य जिम्मेवार
प्रकाशित मिति : १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १३:१०
एजेन्सी । भारतको प्रमुख विपक्षी कांग्रेस आई पार्टी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी ‘भाजपा’का अगाडि पुनः असफल बनेको छ । चार वर्षअघि नराम्रो पराजय चाखेको कांग्रेस आई फेरि एकपटक त्यस्तै नियति भोग्न बाध्य भएको छ ।
सत्तारुढ दल भाजपाका थुप्रै असफलताका बाबजुद पनि १० वर्षअघि लगातार दुईपटक सत्तामा रहेको कांग्रेस आई आफ्नो हैसियतभन्दा तल झरेको छ ।
कांग्रेस आईको पराजयमा पार्टी नेतृत्व मुख्य जिम्मेवार रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसबाहेक भाजपाको कुशल संगठन, मोदीको राष्ट्रवाद, चुनावी रणनीति, आक्रामक चुनावी अभियान कांग्रेस आई पराजयका कारण हुन् ।
सञ्चार माध्यमबाट प्रायः टाढा भाग्न खोज्ने आरोप खेपेका राहुल पछिल्ला महिना देशका प्रायः सबै मुख्य सञ्चार माध्यमसँग खुलेर आफ्नो धारणा राखेका थिए । वेबसाइट, टेलिभिजन च्यानल, पत्रिका, सबैमा छाएका थिए, राहुल । उनले कांग्रेस आईलाई पहिलो पार्टी बनाउने बाचा गरेका थिए, तर चुनावी नतिजा उनको विपक्षमा देखिएको छ, अखिर किन ?
१. नकारात्मक राजनीतिमा रमायो कांग्रेस आई
कांग्रेस आई सुरुदेखि नै नकारात्मक राजनीतिमा रमायो । आफ्नो नेतृत्वमा कांग्रेस आईले मोदीलाई एउटा ‘अयोग्य चौकीदार’को रूपमा चित्रित गर्न खोज्यो । हरेक भाषणमा राहुलले ‘चौकीदार चोर हो’ भन्दै मोदीले ठूला व्यापारी र उद्योगपतिको मुकुन्डो लगाएर सामान्य मानिसको जीवनस्तर सुधार्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धता पूरा गर्न विफल भएको आरोप लगाए । तर, चलाख मोदीले मेंभी चौकीदार अर्थात् ‘म पनि चौकीदार हुँ’ भन्ने अभियान सुरु गरे, जुन अभियान यति प्रभावकारी बन्यो कि अहिले आधाभन्दा बढी भारतीयको ओठमा यो नारा गुन्जिन्छ ।
कांग्रेस आईले मोदीलाई व्यक्तिगत रूपमा भ्रष्ट नेता बताउँदै आएको थियो । गत वर्ष फ्रान्ससँग ३६ वटा लडाकु विमान खरिदमा सरकारले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको प्रमुख विपक्षी दललगायत भारतीय सञ्चार माध्यमले आरोप लगाए । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भएको यस राफेल काण्डबारे कंग्रेसले तल्लो तहका जनतालाई बुझाउन सकेन । पार्टी केबल प्रधानमन्त्री मोदी र मन्त्रीको आलोचनामा नै केन्द्रित रह्यो । सो काण्डबारे भारतीय किसान, तल्लो आय भएका भारतीय जनता र मजदुरले अज्ञानता प्रकट गरे, जसले निर्वाचनलाई खासै असर पारेन ।
निर्वाचन अभियानमा कांग्रेस आईले आफ्नो पार्टीले चुनाव जितेमा गरिबीको रेखामुनि रहेका प्रत्येक परिवारलाई मासिक ८० डलर दिने घोषणा गर्‍यो, तर यो चुनावी रणनीतिले ग्रामीण समुदायका मतदातालाई खासै आकर्षित गर्न सकेन । बरु भाजपाको योजना चोरेको कंग्रेसमाथि आरोप लाग्यो । विज्ञहरूका अनुसार कांग्रेस आईले अति गरिब मानिसका लागि प्रस्ताव गरेको रकम अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक थियो ।
विज्ञहरूका अनुसार निर्वाचनमा कांग्रेस आईको पराजय र भाजपाको विजय हुनुको मुख्य कारण प्रमुख राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय दलसँगको गठबन्धनको अभाव पनि हो । सात सिट रहेको दिल्लीमा कांग्रेस आईले आमआद्मीसँग चुनावी गठबन्धनको प्रयास गरेको थियो । तर, सिट बाँडफाँडमा तालमेल हुन सकेन, जसको फाइदा भाजपाले उठायो । आमआद्मीसँग एकजुट भएर भाजपाविरुद्ध निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न राहुल र आमआद्मीका संयोजक केजरीवाल दुवै असफल भए, तथापि दुवै नेता मोदीका कट्टर आलोचक हुन् ।
कांग्रेस आईले निर्वाचनमा रणनीतिक महत्व राख्ने उत्तर प्रदेशको समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टीसँग गठबन्धन गर्न अस्वीकार गर्‍यो, जसको पश्चात्ताप अहिले पराजयपछि परेको छ । उत्तर प्रदेशका राजनीतिक खेलाडी अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी र मायावतीको बहुजन समाजले अर्को स्थानीय पार्टी राष्ट्रिय लोकदलसँग महागठबन्धन गरेका थिए । मोदीको चुनावी अभियानलाई टक्कर दिन युपीमा सोही गठबन्धन एक मात्र विकल्प बनेको थियो । चुनावी अभियानका क्रममा भाजपा अध्यक्ष अमित साहले शिवसेना, नितीशकुमार र अपना दलसँग शृंखलाबद्ध बैठक सञ्चालन गरेर केही क्षेत्रमा तालमेलको प्रयास गरेका थिए ।
भाजपालाई पश्चिम बंगालमा काउन्टर दिन कांग्रेस आई आफैं शक्तिशाली होइन । पश्चिम बंगालमा भाजपाको मुख्य प्रतिस्पर्धी ममता बेनर्जी नेतृत्वको त्रिणमूल कंग्रेस ‘टिएमसी’ थियो । यस राज्यमा भाजपाले केबल एउटा विषयमा प्रचार अभियान थाल्यो– बंगलादेशी आप्रवासीको खतरा । गैरकानुनी रूपमा बंगलादेशबाट पश्चिम बंगालमा आप्रवासीको घुसपैठ हुनुमा बेनर्जीको मुख्य हात रहेको भाजपाले आरोप लगायो ।
सात सिट रहेको दिल्लीमा कांग्रेस आईले आमआद्मीसँग चुनावी गठबन्धनको प्रयास गरेको थियो । तर, सिट बाँडफाँडमा तालमेल हुन सकेन, जसको फाइदा भाजपाले उठायो।
६. मतदाताको मुड बुझेन कांग्रेस आईले
चुनावमा प्रचार अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । कांग्रेस आई पदाधिकारीले पार्टी आन्तरिक रूपमा विफल भएको भन्दै उच्च नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका वेला चुनावी अभियान सुरु भएको थियो । कांग्रेस आईका लागि चुनावको समय नै अनुकूल थिएन । राष्ट्रपति शैलीको चुनावी प्रचारमा जुटेका मोदीको अभियानबाट मन्त्रमुग्ध भएका सडकका मतदाताको मुड चिन्न नसक्दा कंग्रेसले दोस्रोपटक पराजय चाखेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राहुलकी बहिनी प्रियंका गान्धी राजनीतिमा होमिने घोषणा गरिन् । राहुलले प्रियंकालाई पार्टी महासचिवमा नियुक्त गरे । नेहरू वंशकी पछिल्ली पुस्ता प्रियंकाको पार्टी प्रवेशले कांग्रेस आईलाई राहत दिने धेरै अपेक्षा थियो, तर परिणाम सुखद नरहेको निर्वाचन नतिजाले देखाएको छ । परिवारवादमा कांग्रेस आईमा चलेको आरोप खेपिरहेका वेला प्रियंकाको पार्टी प्रवेशले कांग्रेस आईका कार्यकर्तामा चरम असन्तुष्टि बढेको थियो ।